Gịnị bụ ọdịnihu nke nchịkọta data na-agafe agafe? | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa n'otu aka ahụ nchịkọta data nnabata dị ka isi mmalite nke nghọta ndị na-azụ ahịa, ihe dịka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ na-ekwu na ha agaghị eji data na-agafe agafe afọ abụọ site ugbu a. Nchoputa a sitere na nyocha ohuru emere GfK na Institute for International Research (IIR) n'etiti ndị 700 ahịa ahịa na ndị na-eweta ngwaahịa.
Kedu ihe nchịkọta data na-agafe agafe?
Mkpokọta data nchịkọta bụ nchịkọta nke data ndị na-azụ ahịa site na omume ha na mmekọrịta ha na-enweghị ịgwa ma ọ bụ ịrịọ ikike ndị ahịa. N'ezie, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa amaghịdị etu esi jide data, ma ọ bụ otu esi eji ma ọ bụ kesara ya.
Ihe nlere nke nchikota data nnabata bu ihe nchọgharị ma obu ngwa mkpanaka nke edekọ ebe gi. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịpị dịkwa mma mgbe mbụ ị jụrụ ma ọ bụrụ na akụ nwere ike nyochaa gị, ngwaọrụ ahụ na-edekọ ọnọdụ gị site n'ebe ahụ.
Dika ike gwuru ndi ahia ka emee ha ihe nzuzo n’uzo ha echeghi, ngbasa mgbasa ozi na nzoghari nke onwe ha na emewanye ka ewu ewu. N'ezie, Mozilla kwuputara na Firefox emeela ka usoro nchọgharị onwe ya sie ike site na igbochi-atọ ndị ọzọ trackers. Nke a nwere ike ịdebe iwu gọọmentị - nke na-achọ ichedo ndị ahịa yana data ha karia.
Nsonaazụ sitere na Ọdịnihu nke nghọta na-ekpughe na:
Mmachi mmefu ego bụ na ọ ga-abụrịrị na ọ bụ isi nhazi usoro maka ndị ahịa na ndị na-eweta ya; ma ọtụtụ nchegbu ndị ọzọ - site na ntinye data na nchegbu usoro iwu - ka a na-ahụta ka ọ dị ka ọ dị mkpa.
Onu ahia isii n'ime iri na ndị ahịa na ndị na-eweta ngwaahịa na-ekwu na ha ga-eme nyocha site na iji ngwa mkpanaka na / ma ọ bụ ihe nchọgharị ekwentị afọ abụọ site ugbu a - ya na ndị na - ebubata ya nwere ike kwuo na ha na - eme ya.
Ọsọ nke nghọta ọhụụ imetụta mkpebi azụmaahịa A na-ahụkwa dị ka ọdịiche dị mkpa na ụlọ ọrụ taa, na-atụle nke abụọ n'etiti ndị ahịa (17%) na nke atọ n'etiti ndị na-eweta ngwaahịa (15%).
Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nnata kwuru na ụzọ ha kachasị mkpa maka ịnakọta data afọ abụọ site ugbu a ga-abụ nchịkọta data na-agbanyeghị na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ anaghị eme ihe ọ bụla taa. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụlọ ọrụ nyocha ahịa anaghị atụ anya na ha ga-eme nchịkọta data na afọ abụọ.
Nchịkọta data na-agafe agafe: Ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ?
Ka ndị ahịa wee kwụsị ịkwụsị ma malite ịkesa mkpa, ọbụlagodi ịrịọ, na-enye ndị na-azụ ahịa, ndị ahịa ga-ejide data. Ihe data agha aghaghi ibu nke oma ma di na ozugbo. A na-enye ezi omume site na ịkwado data sitere n'ọtụtụ ebe. Ezigbo oge agaghị eme site na nyocha ma ọ bụ ndị ọzọ - has ọ ga-eme n'otu oge na omume ndị ahịa.
Ikekwe ndị ahịa butere nke a n'onwe ha - ịnakọta terabytes nke data na ndị ahịa, mana anaghị eji ya iji amamihe na-enye ahụmịhe onye ọrụ ka mma. Ndị ahịa na-eriju afọ, na-enwe mmetụta na-eji ha eme ihe ma na-emegbu ha ka a zụtara data ha, ree ha ma kesaa n'etiti tọn nke isi mmalite na-emejọ ọnyà n'ime ha.
Ihe m na-atụ ụjọ bụ na, na-enweghị nchịkọta data na-enweghị isi, mgbidi ahụ malitere ịrịgo. Ulo oru a achoghi iwepu ọdịnaya, ngwa oru na ngwa n’efu iji kwalite ahụmịhe ndị ahịa n’ihi na ha enweghị ike ịchịkọta data ọ bụla nwere ike isi na ya. Ànyị chọrọ n'ezie ịga ebe ahụ? Amaghị m na anyị na-eme… mana enweghị m ike ịta ụta maka mmegide ahụ.
Tags: gfkIIRLọ Ọrụ Maka Nyocha Mba Nilenchọpụta ahịadata nnabatanchịkọta data nnabatannwalenyocha